राजधानी काठमाडौंमा सस्तो मूल्यमा घर बनाउनका लागि जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ ?यी ३ क्षेत्रमा पाइन्छ सबैभन्दा सस्तो जग्गा – Khabar PatrikaNp
राजधानी काठमाडौंमा सस्तो मूल्यमा घर बनाउनका लागि जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ ?यी ३ क्षेत्रमा पाइन्छ सबैभन्दा सस्तो जग्गा
August 22, 2020 353
काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंमा सस्तो मूल्यमा घर बनाउनका लागि जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ ? यदी सस्तो मूल्यका जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं चक्रपथदेखि केही भित्रसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्यतयाः मानिसहरु सार्वजनिक सवारी साधनको सेवा, खानेपानी, ढल, विद्युत्को राम्रो स्थानमा भएका जग्गा खोज्छन् । हामीले पनि सोही आधारमा तोकिएका जग्गाको सरकारी मूल्यांकनका आधारमा सस्तो मूल्यमा पाइने जग्गाबारे जानकारी पस्कँदै छौं । यद्यपि सरकारी मूल्यांकन भने केही फरक पर्न सक्छ ।
काठमाडौंको करिब ८ किलोमिटर टाढा रहेको बुढानिलकण्ठ पनि एक सुविधा सम्पन्न क्षेत्र हो । यदि तपाईं यो क्षेत्रमा जग्गा किन्नु हुन्छ भने सस्तो मूल्यमा जग्गा पाउन सक्नुहुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि मालपोत कार्यालय टोखा सरस्वतीले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको जग्गाको न्यूनतम मूल्य तोकेको छ । खड्का भद्रकाली (हाल बुढालिकण्ठ नगरपालिका वडा नं ६ र ७) मा न्यूनतम मूल्यङ्कन (प्रति वर्गमिटर) को हिसाबले जग्गाको मूल्य तोकेको छ ।
यस क्षेत्रमा रहेको नारायणस्थान जाने पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको मूल्य ५० हजार तोकेको छ । त्यस्तै, सहायक पिच सडकका जग्गाको ३१ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी, कच्ची मोटरबाटो भएको जग्गाको २२ हजार रुपैयाँ, गोरेटो बाटो भएका जग्गाको ११ हजार रुपैयाँ र बाटो नभएको जग्गको मूल्य ६ हजार रुपैयाँ प्रतिस्वायर फिट तोकेको छ ।
यस्तै, खड्का भद्रकाली वर्ग खुलेकोमा क, ख, ग, घ, ङ, च को पनि मूल्य तोकेको छ । जसमा क्रमशः ३३ हजार, २८ हजार, २४ हजार, २० हजार, १६ हजार र ९ हजार रुपैयाँ प्रति वर्गफिट तोकेको छ ।
काठमाडौंबाट करिब १० किलोमिटर टाढा रहेको टोखा नगरपालिका वडा नं २ मा रहेको पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिआना ५ लाख ५० हजार तोकेको छ । त्यस्तै, कच्चीबाटो भएको स्थानमा ४ लाख, गारेटो बाटोसँग जोडिएको १ लाख ८० हजार र बाटो नभएको स्थानको ५५ हजार रुपैयाँ प्रतिआना मूल्य तोकेको छ ।
यसैगरी, टोखा नगरपालिका वडा नं १ मा पनि अरू स्थानभन्दा सस्तो मूल्यमा जग्गा पाइन्छ । जसमा टोखा नगरपालिका १ मा रहेको पिच सडकसँग जोडिएको स्थानको जग्गाको मूल्य ४ लाख, कच्ची मोटरबाटो भएको स्थानको २ लाख २० हजार, गोरेटो बाटोसँग जोडिएको एक लाख १० हजार र बाटो नभएको स्थानको मूल्य ४० तोकेको छ ।
त्यस्तै टोखा नगरपालिका वडा नं ५ र ७ को ट्रयाक रिङरोडसँगै जोडिएका जग्गाको प्रतिवर्गमिटर एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, सहायक पिच सडक जग्गाको ५२ हजार रुपैयाँ, कच्ची बाटो भएका जग्गाको २८ हजार, गोरेटो बाटो भएका जग्गाको १३ हजार र बाटो नभएका जग्गाको न्यूनतम मूल्य ६ हजार तोकिएको छ ।
साथै, टोखा नगरपालिका वडा नं ४, ५ र ६ को पिच भएका मुल सडकसँग जोडिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिआना ३३ हजार, भित्री पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको २६ हजार, कच्चीबाटो मोटरबाटो भएका जग्गाको १८ हजार, गोरेटोबाटो भएका जग्गाको ६ हजार तोकेको छ । साथै, वर्ग खुलेकोमा क वर्ग जग्गाको ३१ हजार, ख वर्गको २६ हजार, ग वर्गको २२ हजार, घ वर्गको १८ हजार, ङ वर्गको १३ हजार र च वर्गको ९ हजार ५ सय तोकिएको छ ।
टोखा नगरपालिका ३ मा रहेका जग्गाको प्रति वर्गमिटर पक्की मोटर बाटो भएको जग्गाको २० हजार रुपैयाँ, कच्ची मोटर बाटो भएको १६ हजार रुपैयाँ, गोरेटो बाटो भएको ४५ सय रुपैयाँ, बाटो नभएको जग्गाको मूल्य २५ सय तोकेको छ । यस्तै छुट्टाइएको वर्गमा ५ हजारदेखि १८ हजार तोकको छ ।
साङ्ला (हाल तारकेश्वर नगरपालिकामा) पनि सस्तो जग्गा पाइन्छ । यस्तै मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम मूल्य अनुसार पिच सडकसँग जोडिएको न्यूनतम जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५ लाख ५ हजार तोकेको छ । त्यसैगरी, कच्ची मोटरबाटो भएको जग्गाको २ लाख ३० हजार, गोरेटो बाटोसँग जोडिएको ८ हजार ५ सय र बाटो नभएको ५ हजार ५ सय तोकेको छ ।
साङ्ला वडा नं ५ का सबै वडाहरु र वडा नं ६ को हकमा ६ का बाहेक अन्य सबै वडाहरुमा पाउने जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिआना ४० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार तोकेको छ । जसमा पिच सडकसँग जोडिएको ३ लाख ५० हजार, कच्ची मोटरबाटो २ लाख, गोरेटो बाटो जोडिएको ७० हजार रहेको छ ।
मालपोत कार्यालयले फुटुङ सिमानादेखि साङलाको बिहानी चोकसम्मका मूलसडकको दायाँबायाँका जग्गा प्रतिआना ८ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । सातनातिर्थ दोभानदेखि साङ्ला हुँदै बिहानी चोकसम्मको मूलसडकको दायाँबायाँका जग्गा प्रतिआना ७ लाख २५ हजार तोकेको छ ।
सरस्वती ग्राण्डीटावरदेखि गणेश मन्दिरसम्मको मूलसडकको दायाँबायाँका जग्गा प्रतिआना (३१.७९) को १० लाख ५० हजार तोकेको छ । टोखा गणेश मन्दिर गेटदेखि मालुङ चोकसम्मको मूलसडकको दायाँबायाँ जग्गा प्रतिआना ८ लाख ८० हजार तोकेको छ । टोखा पञ्चेटार चोकदेखि डल्लु हुँदै भत्केको पुलसम्म मुल सडकको दायाँबायाँका जग्गा प्रतिआना (३१.७९ व.मि) ५ लाख तोकेको छ ।
टोखा जाने मेन बाटो विसिगाल चोकदेखि हात्तिगौडा जाने विष्णुमतिपुलसम्मको मूलसडकको दायाँबायाँका जग्गा प्रतिआना (३१.७९ व.मि) को ५ लाख ३० हजार तोकेको छ ।
टोखा सरस्वती साइबाबा चोकदेखि चरामार्ग सम्मको मूलसडकको दायाँबायाँका जग्गाको (३१.७९ व.मि) ५ लाख तोकेको छ । टोखा गेट (पश्चिमतर्फ)देखि बखुण्डोल बखुण्डोल मूलसडकको दायाँबायाँका जग्गाको प्रतिआना ६ लाख तोकेको छ ।
Prevभोलीको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल भाद्र ०७ गते आईतबार
Nextवडा अध्यक्षले भेन्टिलेटर नपाएपछि मृ त्यु्
विराटनगर ३ की बृद्धाको छोराबुहारी र नातिमा पनि कोरोना संक्रमण,बृद्धाको मृत्यु,अन्तेष्टिमा समस्या
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अष्ट्रेलियाली राजदूतको बिदाइ भेट
आत्महत्या गरेकी भन्दै माइतीलाई थाहै नदिएर हतारहतारमा लास जलाइयो !२ महिना अघि मात्र बिहे भयेकि पुष्पाले
पित्तथैलीको पत्थरीको शल्यकृया गर्न गएकी महिलाको चिकित्सकले आन्ध्रा का’टिदिएपछि निधन, प्रहरीले जव’रज’स्ती उठायो शव…पुरा बिबारण सहित पढ्नुहोस
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (28253)